पर्यटककै भरमा पढाइ - Chinari Post
पर्यटककै भरमा पढाइ
माथिल्लो डोल्पा, पेमा याङ्कीले डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकास्थित क्रिस्टल माउन्टेनबाट ८ कक्षा पास गरिन्। यहाँ त्योभन्दा माथि पढाइ हुँदैन। उनी फ्रान्सेली संस्थाको सहयोगमा काठमाडौं गएर ९ कक्षामा भर्ना भइन्। अहिले उनी निजी स्कुलमा निःशुल्क पढिरहेकी छन्। यही स्कुलका दावा, फुर्वा, पेमा छेवाङलगायत काठमाडौंकै बाबा बोर्डिङमा पढ्छन्।
‘विदेशीले सहयोग नगरेको भए विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने हाम्रो सपना अधुरै हुन्थ्यो’, डोल्पोबुद्ध–१ का वडाध्यक्ष ग्याल्पो थापा (भोटे) भन्छन्, ‘सरकारी उपस्थिति नहुँदा दुर्गममा आएर हाम्रो पढाइको जिम्मा विदेशीले लिनुपरेको छ।’
गाउँ पुग्न सदरमुकाम दुनैबाट तीन दिन हिँड्नुपर्छ। ८ कक्षा पूरा गरेपछि काठमाडौं जाने अवस्था नभइदिएको भए सबै विद्यार्थी दुनै बजार गए कक्षा ९ मा पढ्न बाध्य हुन्थे। ‘तर, दुनै गएर पढ्ने हैसियत यो गाउँका कसैसँग छैन’, वडाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना फैलाउनै कठिन हुन्छ। त्यसमाथि गाउँमा स्कुल छैन भने तीन दिन हिँडेर कसले पढ्ने ? ’
माथिल्लो डोल्पाका अधिकांश सरकारी विद्यालयमा कुनै न कुनै रूपमा विदेशीले सहयोग गरिरहेका छन्। पर्यटकले यो क्षेत्रमा शिक्षाको अभाव देखेपछि विद्यालय खोल्न स्थानीयलाई हौस्याएका थिए। क्रिस्टल पनि २५ वर्षअघि विदेशीकै सहयोगमा खुलेको थियो। सरकारी दरबन्दीका पाँच तथा विदेशीले दिएको पैसाबाट सात शिक्षक राखेर यो स्कुलको पढाइ चलिरहेको छ। काठमाडौंमा रहेका विद्यार्थीको होस्टल र पढाइ शुल्क पनि विदेशीले भिजन डोल्पामार्फत तिरिरहेका छन्।
भिजेरास्थित मुकपोराङ विद्यालयमा स्विस नागरिक तथा संस्थाको सहयोग छ। भवन निर्माण, शैक्षिक सामग्री वितरण र शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्तामा उनीहरूको सहयोग छ। तिन्जेको कुला माउन्टेन स्कुलमा पनि स्विस र जर्मनीबाट सहयोग छ। साल्दाङको सेलरी डुक्ट्रा, छार्काको छार्का भोट प्रावि, सिमेनको सिमेन प्रावि, कोमास प्राविमा पनि विदेशी सहयोग छ।
संयोजक लामाका अनुसार दर्जन स्कुल विदेशीका भरमा चलिरहेका छन्। उनीहरूले वार्षिक १–२ लाख रुपैयाँदेखि करोडसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेका छन्। क्रिस्टलबाट अवकाश पाएका शिक्षक केदारविनोद पाण्डेका अनुसार विदेशीकै अगुवाइमा धेरै दुर्गम ठाउँमा स्कुल खुलेका छन्। ‘विदेशीले सहयोग नगरेको भए माथिल्लो डोल्पाका अधिकांश नागरिक निरक्षरै हुन्थे’, उनी भन्छन्, ‘यहाँको शिक्षालाई यो स्थानमा ल्याउन विदेशीको सहयोग अमूल्य छ।’ बिस्तारै उनीहरूले हात झिक्न थालेकाले समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ।
‘विदेशीले स्कुल खोलिदियौं, अब तपाईंहरू आफैं चलाउनू भन्न थालेका छन्। लगानी पनि घटिरहेको छ’, छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका छेवाङ भोटे भन्छन्। डोल्पोबुद्ध–१ का वडाध्यक्ष थापाका अनुसार अधिकांश स्कुलमा सहयोग घटिरहेको छ। सरकारले चासो नदिने र विदेशीले पनि सहयोग रोक्ने हो भने स्तरीय शिक्षाको सपना अधुरै रहने उनी बताउँछन्। अन्नपुर्णपोष्टबाट
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय निरीक्षक राजेश्वर चौरसियाविरुद्ध १० वटा मुद्दा दायर गरेको छ। ...
बंगलादेश पढ्न गएका विद्यार्थीले राजदूतलाई सुनाए समस्या
बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरुले विभिन्न समस्या समाधानका लागि दुतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ...
गुरुकूल शिक्षाप्रतिको आकर्षणमा कमी हुँदै गएको सरोकारवालाहरुको गुनासो
सरकारले गुरुकुल शिक्षालाई उपेक्षा गरेको छ । गुरुकुल शिक्षासँग जोडिएको संस्कृति शिक्षा जिवनउपयोगगि र व्यवहारिक ...
नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त , शिक्षा प्रतिवेदन किन लुकाइयो ?
दुर्भाग्य सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नीति तर्जुमा गर्नु त परको कुरा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेर ...
बालबोध मा.वि.मा सम्मान तथा तीज बिशेष कार्यक्रम सम्पन्न
शिक्षा नै बिकास को मूल आधार हो भन्ने मूल नारासहित स्थापित तथा सामाजिक कार्यमा सक्रिय ...
त्रीवि को उपकुलपतीमा दौडधुप
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बन्न अहिले दौडधुप तीब्र बनेको छ । ...
कहाँ लुकाइयो शिक्षा प्रतिवेदन ?
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षामा विद्यमान व्यापारीकरण रोक्न भविष्यमा सेवामूलक निजी अहिलेसम्म विद्यालय मात्रै रहने ...
कक्षा १२ को नतिजा सन्तोषजनक देखिएन, शैक्षिक गुणस्तर खस्किएपछि शैक्षिक प्रणालीमाथि प्रश्न
हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक तह कक्षा १२ को नतिजा सन्तोषजनक देखिएन । उच्च तह ३ दशमलब ...
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । ...
एसईई पूरक परीक्षाको मिति सर्‍यो (समय तालिकासहित)
परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को ग्रेडवृद्धि (पूरक) परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन गरेको ...